Global Voices teny Malagasy » Fantaro Ireo Mpikatroka Telo Avy Ao Afrika Avaratra Miady Amin’ny Fikorontanan’ny Toetr’andro · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 19 Novambra 2015 5:54 GMT 1	 · Mpanoratra 350.org Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Ejipta, Maraoka, Tonizia, Fampandrosoana, Mediam-bahoaka, Tontolo_iainana
Radhouane  dia mpitati-baovao sady mpamokatra sarimihetsika mahaleotena monina any Tonizia, firenena fahatelo manerantany mankatò ny fiovana ara-toetrandro ao anatin'ny lalàmpanorenany . Mitantara ireo olan'ny fiovaovan'ny toetrandro ao Tonizia ny lahatsary fanadihadiana nataony “A Siege of Salt and Sand”  [ny fahiranon'ny sira sy ny fasika] notontosaina tamin'ny alalan'ny fanangonam-bola. Ny lohateny dia mampiditra ny tantaran'ny firenena iray “ataon'ny fiakaran'ny haavon'ny ranomasina sy ny haintany fahirano”. Apetrany fotsiny hoe: “Raha tsy mihetsika isika, dia ho lasa tany bitika kely iray mihitsoka eo anelanelan'ny morontsiraka sy ny tany hay.”
Fadoua no mpanorina sady filohan'ny Hetsiky ny Tanora Maraokana misahana ny Toetr'andro . Tiany hanana hoavy tsara kokoa i Maraoka, saingy maniry koa izy mba hisy ny fiampitàna any amin'ny angovo ara-drariny sy mitovy ho an'ny rehetra, izay midika fa jerena koa ny zo sy fitakian'ny olona ao an-toerana voakasik'izany. Araka ny filazany hoe: “raha olana iaraha-manana no lazaina, ary raha fiarovana ny olona eo amin'ity tany ity no resahana, tsy maintsy mampiditra ireo olona ireo – ny olon-drehetra – ao anatin'ny adihevitra ianao.”
Mpandrindra ny Tontolo Arabo ao amin'ny 350.org  i Sarah. Taona maro lasa izay, tsapany fa mihoatra lavitra kokoa noho ny orsa an-tendrotany ny fiovaovan'ny toetr'andro. Amin'ny maha-Ejiptiana azy, nahita ohatra maro momba ireo vondrom-piarahamonina voatery nifindra toerana noho ny fiakaran'ny haavon'ny ranomasina imbetsaka izy.
Manangana hetsika ho an'ny toetr'andro manerantany ny 350.org . Navoaka indray teto amin'ny Global Voices ity lahatsoratra ity noho ny fifanarahana fifampizarana votoaty.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2015/11/19/76534/
 piesy media marolafy iray : http://350.org/northafrica/
 350.org : http://350.org/
 Hetsiky ny Tanora Maraokana misahana ny Toetr'andro: https://www.facebook.com/AYCMOROCCO